Ọrụ nke Gulf na Companieslọ ọrụ Dubai & Middle East Career
Ọrụ Gulf na ụlọ ọrụ Dubai
Ọrụ dị na dubai maka Algerian
Email ngwa Job mara mara otu esi eme ya
Nwere ike 3, 2018
Ọrụ Ntọala Gulf Ụlọ ọrụ Dubai ghọọ ụzọ ọzọ iji nweta ọrụ na ụlọ ọrụ United Arab. Kachasị ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na Dubai ị nwere ike ịchọta na Ụlọ ọrụ kacha elu. N'iburu nke a n'uche, ụlọ ọrụ anyị kere ụlọ ọrụ kachasị mma ịrụ ọrụ na Dubai.
Companieslọ ọrụ dị na mpaghara Gulf jisiri ntakịrị ntakịrị ahụmịhe na 2016. N'oge ụfọdụ, aku na uba etolitela na 2018 na afọ ndị na-esote 2019 na 2020. Ọzọkwa, ọnụahịa gas welitere ọzọ ma e jiri ya tụnyere afọ ndị gara aga.
N'ihi ya, a oru ohuru na enyere aka itolite ngwaahịa ahịa gafee mpaghara United Arab Emirates mpaghara. Ndi Expo 2020 bidoro bulite iwu ọhụrụ. Karim nke, Dubai na Abu Dhabi.
Ọ bụ ezie na akụkụ ụfọdụ nke mba dị na UAE na-eto ngwa ngwa. Ihe ndi ozo Ọrụ na ụlọ ọrụ Dubai ka na-eche arịrịọ ọhụrụ ego aka. Nkwadebe nke Expo na-eweta ihe ịma aka ndị ọhụrụ na mmejuputa iwu owuwu ọhụrụ oru na UAE.
Onu ahia zuru oke nke 100 di elu ụlọ ọrụ dị na Arab ụwa ruru $ 772 ijeri na Eprel 2017, na-enweta 12% na afọ gara aga. UAE na-etolite ugboro ugboro n'ihi uru ahịa zuru oke maka Gulf Trade.
Ọzọkwa, ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ si Abu Dhabi na Dubai, na-aga n'ihu elu 100 ụlọ ọrụ na Arab mbanye ụwa. Ndị na-achọ ọrụ rutere ọrụ site na $ 772 ijeri Dubai ụlọ ọrụ na April 2017. Ya mere ọtụtụ ndị na-enweta 12% na afọ gara aga.
Kedu ihe bara uru ịmalite ịrụ ọrụ na Companylọ Ọrụ Gulf?
Companieslọ ọrụ Dubai na-agbakọ uru net na United Arab Emirates. Ha wedatala ego emefu na HR site na 9.7% n'uzo a ha nwere iru $ 52.9 ijeri, ndị ahịa na United Arab Emirates. N'iburu nke a n'uche, ọrụ ngo ọhụrụ etolitere n'ime mkpokọta ọrụ ọfụma. Otu ma ọ bụrụ na ebe ndị ahụ bụ ngalaba nkwukọrịta na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ndị na-achọ ọrụ kwesịrị iwere mpaghara a dị ka ohere. Otu n'ime ihe atụ bụ Etisalat. Dubailọ ọrụ Dubai a bụ ụlọ ọrụ kachasị na ụlọ ọrụ nkwukọrịta egwu na UAE.
Ọzọkwa, usoro niile na-egosi na ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ na-eto eto n'ime Ụlọ Ahịa na Qatar. Ọrụ ndị dị na Dubai nwere ike iwere site na nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndepụta anyị. Thelọ ọrụ ndị dị na Middle East mụbara akụ ha mụbara site na 2.8%. Na Qatar, Kuwait na Saudi Arabia, jisiri ike inweta ihe karịrị 3.8% iji rute $ 288.3 ijeri ahịa na Dubai na Doha. Companieslọ ọrụ ndị a na-ahụ maka arụmọrụ ha iji nweta ihe karịrị $ trilịn $ 2.7 puku n'ime, 2008 na-ele anya gaa n'ihu na-etolite dika n'oge 2019.
Ikwu okwu n'ozuzu ndị na-achọ ọrụ na Middle East, na-anwa inweta ọrụ na ụlọ ọrụ ndị a. N'ihi na mgbe na-arụ ọrụ maka arụmọrụ arụmọrụ ụlọ ọrụ Dubai, bụ a kwụsiri ọrụ. Karịsịa maka ndị si mba ọzọ ọhụụ na Middle East. N'okpuru ọnọdụ ndị a, gụọ akwụkwọ ntuziaka anyị maka Ọwara ọrụ na Dubai ụlọ ọrụ.
Gịnị mere ụlọ ọrụ kacha mma na Middle East?
Otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mma maka ọrụ dabere na Saudi Arabia na Qatar na Kuwait. N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ ndị si Dubai ka nwere ike ọchịchị ndepụta ya na ụlọ ọrụ 36. Ọtụtụ n'ime ndị na-achọ ọrụ na-esi Qatar na Saudi Arabia na -aga UAE. Companieslọ ọrụ Dubai na-eto n'ime kọntinent 4. Ha na-enwerịrị ọnụnọ azụmahịa na mba karịa 50 mba. Na ụlọ ọrụ ndị dị na Middle East na-achịkwa akụ dị oke ọnụ ahịa.
Nwere ike ịchọta ọrụ na ụlọ ọrụ Dubai ngwa ngwa na ezigbo ahụmịhe. Enwere ụlọ ọrụ ego dị na 59% na UAE na-arụ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ n’inwe ahụmịhe na ụlọ akụ na ngalaba ọrụ ego. You na - enwetakwa MBA na ego. Gha ekwesiri ịgwa ndị isi ego na UAE Banks. Ọzọkwa jikọtara ọnụ na nnweta nke ngalaba HR na UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait. N'ezie, ọ ga-enwe mmasị ịnata CV gị.
Ezigbo ụlọ ọrụ ị nwere ike iche banyere ijikwa ọrụ gị bụ Qatar Morocco na Egypt. Imirikiti n'ime ha ka nwere nnukwu ọnọdụ n'etiti azụmahịa na Middle East. Dịka ụlọ ọrụ kachasị edepụtara, anyị etinyelarị akụ na mpaghara GCC. Ọrụ kachasị mma bụ ego na mmanụ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na Middle East dị ịtụnanya ịmalite ịrụ ọrụ na uber. Dịka kachasị mma na UAE, anyị etinyela NBAD na FGB ijikọ. Ma ụlọ ọrụ izizi Abu Dhabi nke nwere ọkwa dị elu nọ na Abu Dhabi na UAE.
Ọrụ ugbo na ụlọ ọrụ na UAE
Imirikiti ụlọ ọrụ ndị dị na Middle East na-aga n'ihu. Agbanyeghị na ego obodo Egypt kụrụ aka siri ike n'afọ gara aga na azụ nke mbelata. Yabụ ụfọdụ ụlọ ọrụ Egypt dị na Dubai nwere uru ahịa ya n'ime ụlọ ọrụ 100 kachasị elu na ndepụta nke ụwa Arab.
Dubai City gosipụtara dị ka obodo kachasị mma iji soro ụlọ ọrụ ndị nwere ọkwa dị elu rụọ ọrụ. N'ihi na mgbanwe ahịa ngwaahịa United Arab Emirates nwetara karịa 175%, n'ihi ahịa bitcoin na-abawanye. Companieslọ ọrụ ndị si UAE na-eme ka ọ bụrụ onye ahịa kasịnụ n'ụwa azụmahịa. Na ọrụ Gulf ọrụ na Companieslọ ọrụ Dubai n'ikpeazụ na-eto maka expats.
Iji maa atụ, ụlọ ọrụ Global Telecom Holding. Porationlọ ọrụ ahụ bụ onye kachasị enweta ego na ndepụta nke ụlọ ọrụ kachasị arụ ọrụ na America. N'aka nke ọzọ, afọ a Abu Dhabi na A nabatara ndị Dubai ụlọ ọrụ ole na ole ọhụrụ: Omantel, National Bank of Bahrain, Emaar The Economic City na Saudi Ground Services. Ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ a na ndepụta anyị na-akpọ ndị ntorobịa ọhụụ site n'akụkụ ụwa niile.
Ụlọ ọrụ 100 kachasị elu na-arụ ọrụ na Middle East
Mba ọrụ NPSNUMX Gulf Jobs na SABIC
Ka anyị malite na ụlọ ọrụ SABIC kasị ukwuu. Onye nlekọta ahụ kwenyere na SABIC na-arụ ọrụ nlekọta pụrụ iche. Ma ị nwere ike ime mgbanwe. Na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ a ịchọrọ iguzosi ike n'ezi ihe. Smart na amamiihe echiche. Mana tupu oge eruo, ị ga-enweta nnwere onwe iji mee ka echiche ha bụrụ nke ọhụụ. Companylọ ọrụ SABIC kachasị mma na Xlọ ọrụ No.1 na UAE.
Companieslọ ọrụ dị ka SABIC nwere nwere ọrụ aka ya. Corlọ ọrụ a na-achọ ịchọta njikwa uche ghere oghe. Karim nwere onyinye di elu na iju ndi mmadu ajuju.
SABIC mepụtara ọnọdụ maka freshers ọhụrụ. Na karịsịa maka ndị ọkachamara n'achụmnta ego n'ụwa. Ya mere, ma ọ bụrụ na ị na-ele anya gburugburu ebe ọrụ. Lelee anya ụlọ ọrụ ahụ na ha na 2019.
Ọ bara uru iwepụta oge na azụmaahịa teknụzụ a. Gbalia inweta ike ha choro. Ọ bụghị ihe siri ike ịmalite ọrụ maka SABIC. Karịsịa ọ bụrụ na ị bụ onye njem na ọ bụ gị bụ onye nwere ike ịchọta ụzọ ọhụụ. Ọzọkwa, tinye ohere ị nwere na Arab Business nke na-agbanwe ụwa ka mma.
Arụ Ọrụ Ngwá Ọrụ Ọrụ Ngwá Ọrụ NỌNỌMNXX na Kamel CBI
Qatar National BankNke a bụ ụlọ ọrụ ọzọ iji gbalịa iji nweta ọrụ. Ngalaba Banking bụ ụlọ ọrụ na-eto eto. Azụmaahịa a na-achịkwa ndị mmadụ nke ọhụụ nke UAE. Ọhụụ na ebumnuche nke CBI bụ ijere ndị ahịa mba na mba ozi. Companylọ ọrụ CBI na-enye ndị mmadụ ọzụzụ site na inyere ha aka inwe ọganihu na nke ha ndụ onwe onye na azụmahịa.
Ndị CBI na-akwado aka ndị ọrụ ọhụrụ. Ịchịkọta ọhụụ si n'aka ndị ọchịchị UAE. Onye ọ bụla n'ime ndị nọ na CBI na-achịkwa di iche iche na nsonye. N'ebe dị mma, otu ụlọ ọrụ na-etinye ego na ndị ha. Ha na-enwe egosi ihe ndekọ nke atụmanya onye a na-akwalite ọrụ nlekọta ndị isi.
Ọ bụrụ n ’ike iji jikọọ ma wulite akụkọ ọkachamara. Shouldkwesịrị isonyere ụlọ ọrụ a. ma nwee mpako inyere ndị ahịa aka igbo mkpa ha. N'ezie, ụlọ ọrụ a tinyekwara ego na teknụzụ kachasị ọhụrụ na United Arab Emirates.
No.3 FAB Ọrụ na Dubai Company
Nke mbụ Abu Dhabi Bank BloomberG mbụ Abu Dhabi Bank dị ka onye ọrụ kacha elu maka ọrụ na ụlọ ọrụ Dubai. Ụlọ ọrụ a kwenyesiri ike na ị na-arụ ọrụ siri ike na onye ọrụ ahụ. N'ezie, gbanwee ụwa ka mma. Nchịkwa nke FAB nwere nghọta dị omimi nke mkpa ndị ahịa anyị.
FAB na aha ndị a na-akpọkarị bụ First Abu Dhabi Bank. Na ihe kacha ha mkpa bụ ejidere ọrụ. Companylọ ọrụ ahụ na-enyere ndị njikwa aka ịmalite mmekọrịta na ndị ọrụ were ha ogologo oge.
Iji bụrụ ụlọ ọrụ na-aga nke ọma na Middle East ụlọ ọrụ a bụ ewu otu ìgwè dị iche iche nke Gulf Jobs na Dubai. Ọ bụrụ na ị na-achọ ndị na-eto eto, ndị siri ike, ndị siri ike na ndị oké ọchịchọ na-arụ ọrụ na gị. Na ụlọ ọrụ a, ị nwere ike ịchọta ya.
Arụ ọrụ gulf nwere ike ịnwụsi ike, karịsịa na ụlọ ọrụ a na ihe ha na-eme ma gbalịsie ike maka ije ozi ọma. Dị ka onye ọpụpụ ọhụrụ maka Ọrụ Gulf, should kwesịrị ịdị na-adị njikere iji chee ihe ịma aka ndị ọhụrụ. Bido supercharge nke oru gi na Middle East ya na FAB. I kwesiri inwe mmasị isonye na akụ a na njem ha. Ọrụ ndị ahụ na-enye gị ike inweta site na LinkedIn.
N0.4 Gulf career na NCB Bank
NCB na enye onyinye di elu ọrụ na Middle East. Ọrụ na ụlọ ọrụ Dubai dị ka NCB Bank nwere ike ịbụ gburugburu ebe ọrụ dị ịtụnanya. Dị ka ọhụụ ezumike maka ọrụ Gulf na ụlọ ọrụ Dubai. Ọ ga-abụrịrị na ị ga-etinye ya n'elu ndị ọrụ zuru oke na Gulf.
N'ihi na ụlọ ọrụ a nwekwuru nhọrọ maka ndị na-achọ ọrụ. Karịsịa maka ọrụ niile na ụlọ akụ na ọrụ GCC. Ọrụ na Bank NCB nwere ike ịbụ maka ndị na-agụsị akwụkwọ ọhụrụ ma ọ bụ ndị nwere ahụmahụ. Oghere NCB dị n'elu ndepụta maka ndị nlekọta ọhụrụ na MBA agụmakwụkwọ.
Onye ọrụ GCC a nwere echiche nke mgbasawanye na-aga n'ihu. Karịsịa maka Abu Dhabi na Sharjah na UAE. Ha na-etolite n'ime arụmọrụ na ịmepụta netwọk alaka ụlọ ọrụ kwa ụbọchị. Njikwa ụlọ ọrụ mgbe niile na-enye ohere maka ndị chọrọ ịbanye Bank a.
Ụlọ ọrụ a nwere ezi ndị ọrụ HR. Ọ bụ ezie na ha na-achọpụta onye ọrụ ọhụụ ọhụrụ na mkpa ha dị iche iche na ụlọ ọrụ dị iche iche. Ọnọdụ ọhụrụ ga-ahụ nke ahụ na-emepụta ọrụ ọhụrụ na mpaghara Gulf.
Ọganihu ọhụụ ọhụrụ nwere usoro mgbali siri ike. N'ikwu okwu n'ozuzu, ụfọdụ ndị Indian na Ndị agha Pakistani na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ Bank na ụlọ ọrụ a. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ ahụ na-edepụta nkọwa ọrụ maka ọnọdụ ọ bụla.
Ụlọ ọrụ ndị ọrụ NCB dị mfe iji. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ọgbọ ahụ nwere mmekọrịta ọrụ na-enye ndị ọrụ ụwa. Site na ndị ikom na ndị inyom na-achọ ọrụ ị nwere ike nweta ezigbo ọrụ. Ọrụ Gulf na ụlọ ahịa Dubai ma mepee ụzọ maka ndị gụsịrị akwụkwọ na-adị ọhụrụ Na-eme ụlọ ọrụ a nke ọma ịchọta NCB.
Mba ndị ọrụ UAE na-arụ ọrụ UAE
Onye ọzọ ezigbo ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ bụ Etisalat. Maka ụlọ ọrụ a jiri nkà na ụzụ kacha mma ndị si n'aka ụwa niile. Etisalat na-enye ohere kachasị mma iji rụọ ọrụ na Dubai na Abu Dhabi. Karịsịa maka ndị ọpụpụ ọhụrụ si Asia na South Africa.
Ọ bụrụ na ị na-achọ iji wuo ọrụ siri ike na United Arab Emirates. Shouldkwesịrị iji usoro nzipu ọrụ ha gosipụtara ọrụ ha. N'ihi na ọrụ na ụlọ ọrụ a na-enye nkwụsi ike onye ọrụ ọhụụ na mgbanwe.
Dị mfe akwụkwọ ọrụ iji tinye akwụkwọ maka ọrụ. Ma ị nwere ike ịnwe anya maka ọrụ ndị dị na Gulf Jobs. Ezigbo ụlọ ọrụ maka uto n'ọdịnihu yana nhọrọ dị mma na ịmalite ọrụ. Karịsịa na mba Gulf dị ka UAE, Saudi Arabia, na Qatar.
Ọrụ No6 na Al Rajhi Bank
Al Rajhi Bank bụ otu n'ime ụlọ akụ kachasị ukwuu nke Islam na ụwa. Ụlọ akụ Al Rajhi amalitela ọrụ ya na 1957. Ebe ọ bụ na ọganihu dị ukwuu abịakwute ụlọ ọrụ a.
Onye ọrụ nke Al Rajhi Bank nwere afọ 50 ahụmahụ. Ma karịa 90% ha bụ obi ụtọ ịnọgide na-arụ ọrụ. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị isi na GCC na ahụmahụ ego malitere ụlọ ọrụ ego na ụlọ ọrụ a.
N'akụkụ dị mma, Bank na-adabere na ụkpụrụ islam nke Sharia. Ma nke a bụ ihe dị mma n'ahịa Arabic. Ụlọ akụ a guzobere ebe dị ike ihe omuma ya nile maka ndi oru ohuru.
Ka ị na-ele anya n'ihi ogologo ọrụ na echiche ya na-eche ihu n'ihu na ụlọ akụ. Ikwesiri izipu CV gị na ha. Al Rajhi Bank ndị gụrụ akwụkwọ ọhụrụ na ndị na-achọ ọrụ site na India na Pakistan. N'ebe dị mma, ọ bụrụ na ị na-enwe ọganihu dị elu nke ọrụ ntụrụndụ. Ụlọ ọrụ a bụ maka gị.
Ọzọkwa, mgbakwunye, na Bank ọrụ na onyinye Gulf. Companylọ ọrụ a na-enye ụgwọ ọrụ mmalite dị mma, yana n'ihi nkwanye ùgwù dị ukwuu maka azụmahịa Arab. Nwere ike ịnweta mgbakwunye ụgwọ ọnwa, onyunyo, na onyinye. Dika odi nkpa, ulo oru a mepụta ngwugwu asọmpi maka onye ọrụ ha. Yana oru ohuru tinyere ya na ndi anaghi aga ohere na Gulf Region.
No7 Banking na ndị mmadụ Emirates NBD
Ị nwere ihe ọ na-ewe? Na-arụ ọrụ na Emirates NBD. Ị chere na i nwere ihe ọ ga - ewe iji rụọ ọrụ ma na - eto eto na Bank a? Na Emirates na NBD, ọ bụrụ na ị dị njikere ịga nke ọma na ụlọ ọrụ Arab a? Ma tupu ịmalite itinye maka ọnọdụ ọhụrụ ahụ. Were anya ma kpebie ihe ị ga - achọ ime nakwa ụdị mpaghara ị ga - achọ ka ọ bụrụ na ị ga - eme nke ọma. Ụlọ ọrụ ụwa a na-eto eto.
Companylọ ọrụ Dubai City jisiri ike nyochaa ụlọ ọrụ a dị ịtụnanya. Ọtụtụ ndị kwabatara na-arụ ọrụ na Emirates NBD na-ekwu na ọ bụ ụlọ ọrụ dị mma ịrụ ọrụ maka ya. Yabụ Gbaa mbọ hụ na inwere ike Ighachite maka ụlọ ọrụ a. Companylọ ọrụ ahụ nyere ọtụtụ oge ọrụ na weebụsaịtị. Ya mere, ọ ga-abara ya uru ile anya na ụlọ ọrụ na-agba ụgwọ na UAE.
No8 Saudi Electricity Company
Companylọ ọrụ Saudi Electric Electric na-eweta ọrụ nrọ gị. Bido njem nke ihe ndi mmadu. Companieslọ ọrụ Saudi na-ejikwa ntọala nke ya oru ngo na UAE. Saudi Electricity Company na-egosi uto nke azụmahịa ya. Karịsịa na 2018 na 2019.
Ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ dị na Middle East. Na-enweta ego dị egwu kwa afọ. N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ ndị dị na Saudi na-achọsi ike ịzụlite ego ndị mmadụ mmemme pụrụ iche maka onye ọrụ ọhụrụ ha.
Companylọ ọrụ a bụ nhọrọ kachasị mma maka ịhazi atụmatụ ọrụ. Karịsịa maka ndị na-achọ ọrụ ọrụ Gulf. N'ihi na ị nwere ike itinye ọrụ gị na ụlọ ọrụ a. Companylọ ọrụ a na-etinye ndị Indians maka Ọrụ Gulf na Dubai, Qatar na N'ezie Saudi Arabia. Oge ọ bụla ị na - eleba anya na njikwa ha nke ikwenye na-achọ maka ọrụ ogologo oge.
Ị ga-enwe ohere maka ike. Karịsịa iji nweta ọnọdụ ọ bụla na Ụlọ ọrụ ahụ. Site na gụsịrị akwụkwọ ọhụrụ ruo ndị isi ọrụ n'ọnọdụ. Mgbalị ndị a mere ka ọganihu dị ukwuu na mpaghara nke ịchọta ọrụ, eme ka ọrụ dị ka onye ọrụ India.
No.9 Ọrụ na Saudi Telecom
Goodlọ ọrụ ọzọ dị mma maka Ọrụ Nlekọta Gọọlụ nwere ike ịbụ Saudi Telecom. Enwere ike iwepu obi uto na ochicho gị na Saudi Telecom. Companylọ ọrụ a na-enyere aka ndị si n'akụkụ nile nke ụwa.
STC bụ ebe maka ọrụ na-etolite na Middle East. Ụlọ ọrụ a na-eweta ọdịnihu dị mma maka ọrụ ahịa ha. STC bụ mkpali maka mmepe na Middle East na Gulf dum.
STC na-agbalịsi ike ime ihe ọhụrụ n'ime ihe niile ị ga - eme. Site na ọrụ ndị bụ isi ruo ọkwa nchịkwa. Na a ụzọ maka ndụ gị ndụ ọrụ. I kwesiri isonyere ike iji malite njem maka mma echi.
No.10 National Bank of Kuwait
National akụ nke Kuwait na-achọ ndị nwere mkpali na ihe ọhụrụ. Ụlọ ọrụ ahụ eweghachite maka oru ndi nke Gulf. Yabụ n'uche na nke a, ị na-achọ isonyere otu ?. Tupu ijide n'aka na ị ga-enwe nrụpụta arụmọrụ siri ike na aka gị.
Oge obula ibido na Bank a. Ọrụ gị ga-amalite ịrụ ị ga-emekwa ka arụmọrụ gị dị elu karịa ka ị na-eche maka ya.
na mma gị. Soro na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na NBK - na-eme ka ndị Kuwait na-enwu enwu na ndị na-achọ oké ọchịchọ.
Anyị nwere ngalaba na-ahụ maka njikwa nkà ga-enwe gbaa mbọ hụ na itinye akwụkwọ Nke a ga-eme ka ị na-eme nke ọma. Na NBK, ị nwere ike itinye ọrụ siri ike gị na ọnọdụ na-akwụghachi ụgwọ ma nweta nsonaazụ - ị ga-abịa jiri ọrụ nganga na-amata na ị na-atụnye ụtụ na otu nke Kuwait nnukwu rụzuru.
Bụrụ otu n'ime ndị kachasị mma, ghọọ onye òtù NBK.
No11 Welcome To ADCB Bank
Ụlọ ọrụ ọzọ si na ndepụta anyị maka Ọrụ Gulf bụ ADCB. Ebumnuche nke ụlọ ọrụ bụ ịghọ akụ kachasị ọnụ ahịa na UAE. Ụlọ ọrụ ahụ malitere usoro ya na 1985. Site n'ebe ahụ ka ụlọ akụ ahụ abawanyela. Ọzọkwa, ọnụnọ ha nọ na UAE maara nke ọma maka ndị ọgbọ. Tinye na ụlọ ọrụ a naanị onwe gị ma jide ohere ọhụụ.
Ụlọ ọrụ a esiwo ike nweta ike maka ọrụ Gulf na Middle East. Bank ADCB na-enye ndị niile na-achọ ọrụ n'ụwa ohere ịchọta ohere gafee nzukọ. Ụlọ ọrụ zuru okè a bụ maka onye ọ bụla nwere mmasị ịchụso ọrụ bara uru. N'aka nke ọzọ, ha na-enyere gị aka ịrụ ọrụ na ndị ọrụ ụwa na ndị ahịa si n'akụkụ ụwa dum.
No12 Jiri nlebara anya hụ Samba
Ezi ụlọ ọrụ bụ Samba. Ha bụ ụlọ ọrụ ụlọ akụ na mbụ. Ọzọkwa, njikwa ejikọtara ọnụ na ọnụnọ na Gulf na India Mumbai mpaghara. A nabatala ụlọ ọrụ Samba n'ụwa niile na ọrụ ọrụ dị ịtụnanya. Yabụ ịchọ ọrụ na ụdị ụlọ ọrụ a nwere ike ịbụ ihe obi ụtọ. Karịsịa maka ndị ọhụrụ na ezigbo ọmarịcha ahụmịhe na Middle East.
Ọrụ ụlọ akụ nke Samba bụ ụlọ ọrụ akụ na ụma na ụlọ ọrụ ntanye onwe ya. A ma ama ahịa ahịa nke Samba nke ụwa. N'iburu nke a n'uche, gbalịa ka ha nwee ego n'ọnọdụ ha ma ọ bụ ma ọ bụ ohere ahịa.
Choputa oru ohuru tinyere ya ichoro ime na ngalaba na anoghi ego. Withrụ ọrụ na Samba ga-arụpụtakarị na profaịlụ gị ga-amata dika onye okpa ego di elu. Ọganiihu na ọrụ ga - ekwe omume n'ezie na ngalaba nchekwa akụ na KSA.
No13 kwalite ohere ọrụ
Ụlọ ọrụ ọzọ bụ Emaar. Ha bụ nnukwu nzukọ na Dubai. Na-arụ ọrụ n'ọtụtụ mpaghara ọbụna maka ndị ọrụ ụwa. Maka ihe atụ Ndị agha Iran yana ndị ọrụ India. Companylọ ọrụ Emaar hụrụ n'anya. N'ihi na azụmaahịa Emaar bụ akacha uru ya na UAE.
Emaar bụ ezigbo ụlọ ọrụ, ha na-achọ ndị egwuregwu na-anụ ọkụ n'obi, ndị siri ike, ndị na-eme egwuregwu egwuregwu. Ụlọ ọrụ na-anakọta na mpaghara Gulf. Ya mere, ọ bụrụ na ị bụ onye nwere nnọọ mmasị. Ị nwere ike ịnweta nsogbu nke ịrụ ọrụ maka nzukọ zuru ụwa ọnụ na-arịwanye elu.
Emaar Properties business na eziokwu adịghị ga-ẹkenam. Ha bụ nnukwu nzukọ ma na-azụpụta nnukwu ego. Ntre ke emi ke ekikere, inweta ọrụ na ha kwesịrị ịdịrịrị mfe.
No14 DP Trade Global Trade
Batara na DP World Company. Ha bụ ndị isi na-arụ ọrụ n'ahịa zuru ụwa ọnụ. Ụlọ ọrụ ahụ na-akwụ ụgwọ n'ime ọtụtụ mpaghara. DP World nwere akụkụ dị oke egwu nke sistem ahụ nhazi usoro. DP Global Trade bụ ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ. Na otu kachasị mma maka ndị na-achọ ọrụ ọhụụ.
DP World nwere folda nke 77 ndị ọrụ ụgbọ mmiri. N'ikwu okwu n'ozuzu, ha dị mma maka ọrụ zuru ụwa ọnụ. Gbalịa mee ya, jide ohere na DP World.
Ntuzi nke ụlọ ọrụ a, inwe ọhụụ na-enweta nwa nwoke na-achịkwa nkwụsị. A na-akwado ọrụ azụmahịa DP Global Trade site na ụlọ ọrụ 50 metụtara na mba 40 gafee mpaghara isii. N'ụzọ nke a, ị nwere ike iru ọrụ n'ụwa niile.
Bido na Riyad Bank rụọ ọrụ. N'ihi na ha bụ na-ahụ maka ndị ọrụ kachasị mma na mpaghara Ọwara. Companylọ ọrụ Bank a bụ ụlọ ọrụ ego kachasị na Kingdom of Saudi Arabia na Middle East. Mgbe mụ na ụlọ ọrụ a na-arụ ọrụ, ị nwere ike inweta ọnọdụ nche.
Ụlọ ọrụ ahụ bụ ala nnabata maka azụmahịa ụwa. Riyad Bank Business nwere ezigbo ụlọ ọrụ na ịzụ ahịa aha. Ya mere, ọ bara uru iji nlezianya lee anya n'ọnọdụ ha. Ụlọ ọrụ a na-agagharị ọrụ cryptocurrency na UAE.
Ụlọ ọrụ Ooredoo Corporation
Ooredoo bụ mgbasa ozi na-eto eto nzukọ na MENA. Ha na-eto eto ma na mpaghara ma n'ụwa. Na-enwekwa ọnọdụ maka ndị na-ekpofu ha.
Redlọ ọrụ ụlọ ọrụ Ooredoo na-elegara ndị ọrụ raara onwe ha nye. Ka na-aga n’ihu biarue nso na anya ha. Lọ ọrụ Ooredoo na-ele anya ịbụ otu n'ime ụlọ ọrụ nkwukọrịta 20 kachasị elu n'ụwa site na 2020. Ọhụrụ ndị na-achọta ọrụ na ha kwa ụbọchị. N'okpuru ọnọdụ ndị ahụ, gbalịa bulite CV.
Ha na-akwụ ụgwọ ndị isi, ọkachamara nyocha na ndị ọrụ mgbasa ozi. Ọ bara uru gaa na ebe nrụọrụ weebụ ha. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-achọ ohere ịnweta ohere ngwa ngwa na ụlọ ọrụ mgbasa ozi.
Ọrụ Nzuzo No17 na SABB maka Saudi British Banking
Companylọ ọrụ ego SABB bụ nzukọ na-aga nke ọma. SABB ụlọ akụ mba Britain bụ ụlọ ọrụ ya na ochicho di elu maka odinihu. Ọzọkwa, nzukọ a nwere njikọ siri ike na HSBC.
Nke a pụtara na Saudi British Banking Company. Na-achọ ndị nwere nkà. Karịsịa maka ndị na-achọ ọrụ n'ụwa bụ ndị na-achọ ịzụlite ọrụ ha ma nwee ihe ịga nke ọma na HSBC nke òtù azụmahịa.
I kwesiri ikwenye mụtakwuo banyere ọrụ na SABB. Lelee ebe nrụọrụ weebụ ha maka ụfọdụ ọrụ anyị dị ugbu a, yana otu esi etinye. Nweta CV gị emelitere elu ma na-agba ọsọ ma kpọtụrụ Saudi British Bank.
No18 KFH Bank Banking
Kuwait Financial House Banking bụ ụlọ ọrụ ọzọ na ndepụta anyị. Na-asụ KFH Ahụike n'ozuzu na Ọfịs ọ bara uru ịnweta. Dị ka njem ga-eme n'ọdịnihu na ngalaba Ọrụ Jobs, ikwesiri izipu ha CV.
Ndị Kuwait Financial House na-arụ ọrụ na mpaghara onwe. Otu ezigbo ngwongwo bu na ha na a na achi ndi ahia. Searchingchọ ọrụ na ha dịkwa mma maka expats na UAE. Ọbụnadị nwanyị onye ọbịa ahụ nwere ike iji nweta ọrụ na Kuwait. N'okpuru ọnọdụ ndị a, KFH Personal Bank Banking dị mma maka ndị na-ekpofu ihe.
No18 Dubai Islamic Bank
Alakụba ụlọ akụ Dubai, nwere mmasị siri ike ịrụ ọrụ na Middle East. Alakụba Islam mbụ nke ụwa nwere meghere ọnụ ụzọ ya na Malaysia ndị ọrụ na Pakistan. Mana ha na-amalite na Pakistan, ha ugbu a n'ozuzu Gulf Jobs Region.
Ụlọ akụ ahụ bụ iwu na-akwụsi ike na ego. Pakistan na njem ya na enye "World Class Banking, Ala Islam". Nke a bụ ihe mere ụlọ akụ Alakụba Dubai na-akpọ ndị ọkachamara ọrụ nkà ịbanye DIBPL.
Withinrụ ọrụ n'ime gburugburu ndị Alakụba abụghị ihe niile gbasara ọrụ. Kwesiri ịtụkwasị onwe gị obi na ị na-ege ndị ọzọ ntị. Asbi dịka onye Alakụba nwere ndụ mpụtara ọhụrụ na ọrụ ọhaneze. Banklọ akụ ijikwa ụkpụrụ nke na-emetụta gburugburu ebe ọrụ anyị.
No.19 Bank Saudi Fransi
Bank Saudi Fransi bụ ụlọ ahịa azụmahịa zuru oke. Ụlọ ọrụ a ghọtara nke ọma maka ijere ndị ahịa ya ozi ọma na mpaghara ụwa. Ụlọ ọrụ anyị na-enyocha ọrụ a dịka otu n'ime ezigbo ndị ọrụ ego maka Gulf Jobs.
Ụlọ ọrụ a Ọ bụ onye na-enye ndị ọrụ ego zuru ezu. Ọtụtụ ndị na-achụsasị anya na-arụ ọrụ na ha. Ọtụtụ mmadụ hụrụ ngwaahịa ngwaahịa sitere na ụlọ ọrụ a n'anya n'alaeze Saudi Arabia. Ya mere, ọ bara uru n'ezie maka ohere ha na Banque Saudi Fransi.
Banklọ akụ a na-anwakwa ịkụ ahịa ndị ọzọ. Egosiputara BSF di elu na ndi ahia ya buru ibu na egosiputa onodu ego ya siri ike. Gbalịa ịmalite ha ọrụ nlekọta ọrụ nke Gulf, n’ezie, ọ bara uru.
Attijariwafa Bank bụ ụlọ akụ na Morocco. Maka na ọ bụghị na ụlọ ọrụ 10 dị elu maka Ọrụ Gulf. Attijariwafa Bank bụ ezigbo nwere mmasị onye ọrụ. Ụlọ ọrụ a gụnyere ntinye aka Mohammed VI nke na-ejide ụlọ ọrụ SNI.
E guzobere ụlọ akụ Attijariwafa mgbe oge nkwukọrịta gasịrị. Njikwa ego a na-achịkwa n'etiti Banque Commerciale du Maroc na Wafabank ma ọ bụ onye isi na Casablanca. Emeela, ụlọ akụ Marroco amalitekwa. Ọrụ Gulf na Dubai ụlọ ọrụ dị mma na ụlọ akụ Attijariwafa.
Mba nke Arab Bank nke Jordan
Ala Arab dị na Jordan bụ ezigbo ụlọ ọrụ n'ime ụlọ akụ na ọrụ ego. N'ụzọ dị ịtụnanya, anaghị arụ ọrụ nke ukwuu na UAE. Na Bank Arab, otutu nke ndị mmadụ nwere mmasị na ọrụ. Nke a bụ ihe mere ha ji ejide onwe ha n'ịbụ otu n'ime ndị isi ego na mpaghara ahụ.
N'afọ ndị gafeworonụ, anyị ejisie ike na-adọta ndị ọrụ nka ma anyị na-etinyekwa ego na iwulite ikike ahụ ike nke ọrụ ọrụ anyị, nke anyị lere anya dị ka otu n'ime akụ anyị kacha dị oke ọnụ ahịa. Anyị niile nye ndị ọrụ anyị ọrụ pụrụ iche, ezigbo ebe obibi oru, ugwo osobo na ohere mmepe.
Ọrụ Nlekọta Ọrụ Nlekọta Mba na Arab Bank
Ndị ọrụ na Arab Bank. Ụlọ ọrụ na-akwalite onwe ha na ha ga-eburu gị gaa n'ọkwá kasị elu. Ọ bụrụ na ị bụ achọ ọrụ na GCC Mpaghara. Ụlọ ọrụ a nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ maka gị. Bank Bank dị mma n'etiti ọrụ Gulf na ụlọ ọrụ Dubai.
Ezigbo ụlọ ọrụ maka ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ. Karịsịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịdebanye CV ma ọ bụ denye aha ngwa ngwa. N'aka nke ọzọ, mgbe ị na-eme ya ezumike na-achọ na Gulf na ụlọ ọrụ a. Can nwere ike idobe ịmaliteghachi gị na ọdụ data ha zuru ụwa ọnụ. N'aka nke ọzọ, Ndị na-arụ ọrụ na Arab National Bank ga-abụ a smart nhọrọ maka gị.
No23 Mashreq Bank Careers
Ụlọ ọrụ ọzọ bụ Bank Mashreq.
Enwere otutu ụzọ na ohere maka mmepe ọkachamara na Mashreq. Isi ụlọ ọrụ ahụ lekwasịrị anya na-adọta ndị egwuregwu otu kachasị mma. Relọ akụ Mashreq na-azụlite onye ọrụ ọ bụla, na-ejigidekwa azụmaahịa kacha mma. N'ikwu okwu n'ozuzu, ịmalite ha ọnọdụ azụmahịa na ha mma.
Ụlọ akụ a na-akwụ ụgwọ ụgwọ ahịa ma na-akwụ ụgwọ ahịa. Ntre ke emi ke ekikere, ndị ọpụpụ ga-ebuteghachi na ha professionally. Ụlọ ọrụ na-enye ndị ọrụ dị ugbu a nsogbu siri ike. Na ndị na-esonye ọhụrụ na ohere ọhụụ dị na Gulf.
O wulitela omenaala ulo oru a site n’uche ndi mmadu kwenyere na nkwenye. Ọwara ọrụ na Dubai ụlọ ọrụ.
No24 Bank Audi na Lebanon
The Bank nwere ogologo akụkọ banyere ọganihu ego. Ụlọ akụ a nwere ụdị ngwaahịa na ọrụ dị iche iche. Ọzọkwa, Lebanon bụ ebe dị mma ịrụ ọrụ ndụ. Karịsịa na ezinụlọ gị.
Bank Audi na-ebu ụzọ buru ibu n'etiti ụlọ akụ Lebanọn n'ihe gbasara akụ zuru oke. Ọzọkwa, ha na-anata ọtụtụ ndị na-ere ihe. Ego kachasị mma, nkwụnye ego ndị ahịa, mgbazinye ego na ọganihu na ụlọ akụ a bụ naanị mmalite. Banyere Audi Bank nwere usoro ịntanetị dị elu. Nke a bụ a Bank Audi si free. Super na-ewu ewu na Lebanon.
Na-arụ ọrụ na nzukọ a. Ezi ụlọ ọrụ ahụ, na-eji ngwa ngwa e-banking na-agbanwe ngwa ngwa. A na-ahapụ ndị ọgbọ ọhụrụ iji nyochaa akaụntụ CV gị na ụlọ ọrụ a. Ịgba ụgwọ ego na kaadị, iji mee ụlọ ahịa dị elu.
Ahli United Bank kwadoro inyefe ọrụ kacha mma na ọkwa niile nke nzukọ. N'okpuru Gulf Country, ụlọ akụ a na-anakọta maka ndị ọrụ ọhụrụ.
Nke a bụ ihe mere anyị ji nwee ọganihu anyị na-adọta, na-achọpụta na ịzụlite nkà kachasị mma na ahịa. Dị ka ndị ọhụrụ na-achọ ọrụ na ụlọ ọrụ dịka Ahli Bank. Ụlọ ọrụ Dubai City kwadoro ịkwalite ụlọ ọrụ a ụlọ ọrụ kasị mma na-arụ ọrụ na Middle East.
Ụlọ ọrụ a nwere ọkwá siri ike dị ka onye ọrụ maka ọrụ Gulf. Ọ bara uru ijikwa ngwa ọrụ gị. N'ebe na-adịghị mma jide n'aka na ederede CV nke ọma.
Dịka onye na-achọ ọrụ, ị nwere ike ịhọrọ ọnọdụ na mpaghara. Ụlọ ọrụ Dubai City na-atụle ụlọ ọrụ a maka ndị ọrụ ụwa. N'ihi na ụlọ ọrụ a ị nwere ike n'ezie nweta ohere ịchụ na ịrụ ọrụ na Gulf Region. Bụrụ ndị ọrụ nwere ahụmahụ na ndị na-akwado ndị maara ihe ọ ga-eme iji duzie ma nwee ọganihu n'ahịa ụwa.
Nkwekorita Nkwekorita nke Mba ANNUKA Zain
Chọta ọrụ gi na zoro ezo na telecommunication.
Companylọ ọrụ nwere ezigbo mmasị na Middle East ịrụ ọrụ maka. Zain na-enye ezigbo ọrụ ga-adịte aka. Otu n’ime ebe ị nwere ike ịchọta ọrụ na Zain bụ Linkedin. N'ikwu eziokwu, enwere otutu ebe ebe ị ga - esi nweta ohere ha. Dịka eziokwu, Zain bụ otu n'ime ọrụ Gulf kasị mma na ụlọ ọrụ ndị Dubai.
O doro anya, ụlọ ọrụ a bara ezigbo uru maka ịnye CV. A na-emeghe ọrụ na Zain na Maroco, Jordan, na Kuwait. N'ebe dị mma ma ọ bụrụ na ị nwere ezigbo ahụmahụ ị ga-ahụ ọrụ n'ebe ha nọ na Middle East. Ọrụ na Zain na ị nwere ike ijikwa ọrụ Cal Calka ma ọ bụ ọkachamara ịchụ ihe.
Gbalịa ịchọta ọrụ gị na Banque Centrale Populaire.
Ụlọ ọrụ Casablanca, Morocco ụlọ ọrụ a na-enye ọrụ ego. Ọrụ ọhụụ ndị ọhụụ ọhụrụ na ha si n'akụkụ nile nke ụwa. Ọ bụghị naanị site na Magọcco. N'ihi na Centrale Populaire SA na-arụ ọrụ dịka ụlọ akụ azụmahịa. Na ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ, ọ bara uru itinye akwụkwọ maka ọrụ nrọ.
Ọrụ ego ndị a na-agụnye njikwa ọrụ kachasị elu. Ụlọ ọrụ anyị na-adụ ndị na-achọ ọrụ ka ha jikwaa ọrụ ọrụ na ụlọ akụ a. Na ezigbo ụgwọ ego dịka onye ọrụ na Banques Populaires Régionales. Ị nwere ike ịchọta ọrụ ọrụ mmasị.
Ịchọ ọrụ n'ụzọ doro anya na ụlọ ọrụ akụ na ụba bụ ezigbo nhọrọ. Ọrụ, na ọrụ nlekọta nke ọdịmma ndị òtù Crédit Populaire Morocco. N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ ahụ tọrọ ntọala na February 2, 1961, ma bụrụ onyeisi obodo Casablanca, Morocco.